Global Voices teny Malagasy » Manameloka Ny “Xinjiang Mpampihorohoro” Noho Ny Fanafihana Nahafatesana Olona Tao Kunming i Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Manameloka Ny “Xinjiang Mpampihorohoro” Noho Ny Fanafihana Nahafatesana Olona Tao Kunming i Shina
Voadika ny 06 Marsa 2014 8:30 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Ady & Fifandirana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
Niampanga ireo mpikatroka avy ao amin'ny faritra andrefana ao Xinjiang tamin'ny vono-olona tao amin'ny garam-piaran-dalamby tao an-tanànan'i Kunming, atsimo-andrefan'i Shina ny manampahefana tao Kunming. Olona 29 no namoy ny ainy ary maherin'ny 130 ireo naratra tamin'ny fanafihana tamin'ny 1 Marsa araka ny filazan'ny sampana fampahalalam-baovaom-panjakana Xinhua.
Nifanojo tamin'ny fahatongavan'ireo solombavambahoaka manerana ny firenena tao Beijing tamin'ny fivoriana faharoan'ny Kongresy Nasionalim-bahoaka faha-12 ny fanafihana, fivoriana fanaon'ny parlemanta isan-taona, izay nisokatra tamin'ny 5 Marsa.
Nilaza ny governemantan'i Kunming fa “ireo hery separista Xinjiang no nitarika ny fanafihana fampihorohoroana niteraka vono-olona tao amin'ny garan'ny fiaran-dalambin'i Kunming.” Namariparitra  ny loza ho “fanafihana fampihorohoroana nalamina sy nomanina mialoha” ny sampana fampahalalam-baovaom-panjakana Xinjiang.
29 no namoy ny ainy tamin'ny fanafihana tao Kunming. (Sary avy amin'ny Sina Weibo )
Tsy vao sambany ny sampam-baovaom-panjakana sy ny manampahefana ao an-toerana no namariparitra ireo trangan-javatra mahery vaika ho fihetsika fampihorohoroana. Namadika ny heloka vono-olona ataon'ny olo-tokana ho heloka iombonan'ireo foko vitsy an'isa ity famaritana ofisialy ity ary niafara tamin'ny fanomezana anarana azy ireo ho ahiahiana ho mpampihorohoro . Tamin'ny Oktobra 2013, niantso ny foko Miozolomana Uyghur izay nisy iray nametraka ny fiarany hipoaka tao amin'ny faritra be olona tao amin'ny kianjan'i Tiananmen ho mpampihorohoro mpamono olona ny manampahefana Shinoa. Taorian'ny fifandonana tao Tiananmen, nanamafy ny filaminana tao Xinjiang i Shina.
Tao amin'ny Sina Weibo, nanjary lohahevitra niadian-kevitra be indrindra tamin'ny 2 Mey 2013 ny herisetra tao Kunming . Namariparitra ny antsipirihan'izay zava-nitranga ny sasany tamin'ireo nanatri-maso, na dia efa voafafa haingana aza ny ankamaroan'ireo lahatsoratra.
Na dia niteraka fankahalana tsy araka ny tokony ho izy amin'ireo mpiserasera Xinjiang aza ny fametahan'ny governemanta anarana hoe “Xinjiang mpampihorohoro”, nampitandrina ireo manam-pahaizana sasany mba tsy hametaka ho mpampihorohoro amin'ny vahoaka Xinjiang.
Mpanao gazety mivantambatam-piteny, Li Chengpeng nanoratra hoe [zh]:
Tsy maninona na iza, na noho ny antony inona, na foko inona, no nisafidy toerana be olona tahaka ny garan-dalamby, ary mikendry ireo olona tsy manan-tsiny- ratsy toetra izy ireo ary tokony hoany amin'ny helo.
Olom-pirenena teratany Xinjiang “vicki” nanoratra hoe :
Halina teo, nahita ny loza tao Kunming tamin'ny tambajotra sy media isan-karazany isika, mahatsiaro malahelo aho, saingy amin'ny maha-olona avy ao Xinjiang ahy, dia tsy maintsy miteny zavatra aho. Efa nahifik'izao tontolo izao ny mpampihorohoro, tsy afa-misolotena ny faritra manontolo ao Xinjiang izy (mpampihorohoro)! Azafady, atsaharo ity fametahana anarana amin'ny namanareo ity! Fotoanan'ny fahanginana hoan'ireo niharam-boina tao Kunming avy ao Xinjiang !
Manam-pahaizana mpikaroka momba ny Media “Du Zijian ” nanoratra hoe:
Tsy mahazaka ny voambolana « Xinjiang » izay nivoaka tamin'ny vaovao aho. Mpampihorohoro ny mpampihorohoro, faikan'olombelona;.. tsy tokony ampifandraisina aminà firenena na faritra izany. Tsy rariny izany fametaha-marika izany, manimba ny firenena manontolo ny fametahana anarana tahaka izany. Manohitra aho!
Mpiserasera malaza “Jiazhuang zap niuyue” nanoratra hoe :
Azafady mba aza alefa any amin'ny fampitahorana sy fisaraham-bazana firenena iray manontolo ny fahatezeranareo amin'ny mpampihorohoro, satria izany no tadiavin'izy ireo. Azafady, aza avadika ho fanavakavahana sy fandrafiana firenena iray ny ady ataonareo amin'ny herisetra, satria izany no tadiavin'izy ireo.
Bilaogy Qiwenlv  naneho hevitra hoe:
Manoloana ireo fanafihan'ny mpampihorohoro, tsy tokony alefa any amin'ny vahoakan'i Xinjiang na Uighur ny fahatezerantsika, fa tokony handinika kosa ny antony niavian'ity voina ity. Tsy misy olona maniry hahita olona tsy manan-tsiny ho aripaky ny mpampihorohoro, fa tsy hahitana lalana hivoahana ny fametrahana ankilabao ny antony mahatonga izany fa mitady vokatra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/03/06/58323/
 fanafihana : http://www.bbc.com/news/world-asia-china-26404566
 ahiahiana ho mpampihorohoro: https://globalvoicesonline.org/2013/11/18/china-please-dont-put-terrorist-label-on-uyghur-people/
 kianjan'i Tiananmen : http://www.cnn.com/2013/10/31/opinion/china-tiananmen-uyghurs/
 herisetra tao Kunming: http://huati.weibo.com/867683?from=object&filter=mining
 nanoratra hoe : http://weibo.com/1189591617/Az1DLiHmF
 nanoratra hoe: http://huati.weibo.com/868715?from=singleweibo&mod=recommand_huati&filter=mining
 nanoratra hoe: http://weibo.com/1645101450/Az4Gx5bIx